Moramanga : ady tany saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Moramanga : ady tany saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka
Par Taratra sur 29/12/2017
Resaka ady tany saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka tany Amboasary gara. Efa vonona ny olona niaraka tamin’ny vato sy kibay. Tonga ny zandary ary nandamin-draharaha ny ben’ny Tanàna.
Saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka ny resaka ady tany, any amin’ny kaominina ambanivohitra Amboasary Gara manaraka ny lalam-pirenena faha-44 iny, anatin’ny disitrikan’ i Moramanga faritra Alaotra Mangoro, ny alarobia 27 desambra teo. Niteraka savorovoro teo amin’ny mponina tao an-tanana ny fisian’ny olon-tsy fantatra, niaraka tamin’ny vaditany, sy mpandrefy tany ary nilaza fa mpandova ramatoa iray, ka haka ny ampahantany eo anivon’ny tananan’Amboasary. Ity tanàna ity izay efa feno sy trano fonenana hatramin’ny naha tanana an’ Amboasary azy.
Raha ny loharanom-baovao hatrany, mbola tsy nahitana fahatezeram-pokonolona tahaka ity niseho ny alarobia teo ity, tamin ‘ity kaominina ity. Efa nahina mafy ny saika nisehoan’ny fitsaram-bahoaka tamin’ ireo fito mirahalahy mitonona fa mpandova ny tany. Nilanja soram-baventy tsy manaiky ny fiheverana fa haka an-keriny ny tanànan’ izy ireo ny fokonolona. Nisy ny efa nilanja bolongam-bato sy kibay, ary voalaza fa nisy nikasa haka solika mihitsy. Tabataba sy horakoraka andanin’izany nanerana ny tanàna ary nitangorona ny olona, nikatona ny tsena, sns.
Tonga ny zandary
Niantso haingana ny borigadin’ny zandariamariam-pirenena sy vondrontobim-paritra zandary
Moramanga, ny ben’ny Tanànan’Amboasary Gara, Razafitsalama Razafindramiadana, mba ho fiarovana ny ain’ny vahoaka sy ny fananany. Tsy nijanona teo anefa ny fanelanelanana nataon’ ity ben’ny Tanàna ity tamin’ny fisorohana tsy hisian’ny fitsaram-bahoaka nohon’ny
hatezerana efa nihoa-pampana tamin’ ireto vahoaka fa niezaka ny nampitony izy. Nanao izay nandresen-dahatra ihany koa ny andaniny mba hampiatoana aloha ny fikasana handrefy tany. Tsy vitan’ izay fandresen-dahatra anefa ny nataon’Iingahy ben’ny Tanàna fa voatery namoaka didim-panjakana kaominaly amin’ny maha ben’ny Tanàna azy, ka mihantona aloha ny fikitikitihana raharaha fandrefesan-tany ao an-tampon-tananan’Amboasary Gara izay hiandraiketany.
Raha iverenana ny raharaha, nisy raim-pianakaviana iray nandefa fiantsoana ho an’ny fokonolona eo an-tampon-tanànan’ Ambosary Gara fa manana taratasy ka mpandova olona iray efa maty izy ka handrefy ny tany lovany. Ny loharanom-baovao hatrany milaza fa tsy niteraka ity olona voalaza etsy ambony ity fa nanangan-jaza ka tsy ilay nantsangana io mitonona ho mpandova io fa fisolokiana izao niseho izao, hoy hatrany ireo fokonolona. Nilamina aloha ny alarobia teo.